Redmi 10X ga-abụ ihe na-atọ ụtọ n'etiti-etiti ruo 8 GB nke Ram na 256 GB nke ROM | Gam akporosis
Redmi 10X ga-abụ ihe na-atọ ụtọ n'etiti-etiti ruo 8 GB nke Ram na 256 GB nke ROM
O yiri ka Redmi ọ na-akwadebe mwepụta nke otu usoro ntanetị ga-esote ya, nke ga-abata na ụdị akpọrọ Redmi 10X.
A na-atụle nke a maka izu ole na ole, na-akwado otu n'ime akụkọ ọhụụ kachasị emetụta kwuru ọnụ pụtara na nchekwa data nke Google Play Console. Ugbu a, nke a na-agbanyekwu ike n'ihi eziokwu ahụ bụ na ntụgharị nsụgharị nke ihe nlereanya ahụ apụtawo maka ekele Ishan Agarwal -nmekọrịta na 91Mgbo- tinyere ụfọdụ asịrị banyere njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ ya.
Na enweghị nke Redmi Rịba ama 9 usoro Na China, Redmi 10X ga-ejupụta ọdịiche ahụ. Nchịkọta ọzọ a ga - abụ ihe ọ bụla karịa Redmi Rịba ama 9 ama ama maka ahịa ahụ, n'ihi ya, ọ ga-enwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu àgwà ahụ ama ama ama ama ama ama na-arụ kwa ekwentị. N'ezie, a ga-enwe mgbanwe ụfọdụ na ekwentị ọhụrụ a.
O doro anya chipset nke ga-etinye Redmi 10X bụ Helio G70 nke Mediatek dere, otu n'ime ndị nrụpụta ihe ohuru nke semiconductor nke ekwuputara na mbido afọ a na Jenụwarị, na-enwe ụdịdị dị iche iche na ike egwuregwu.
Dị ka anyị kọwara n'oge gara aga, octa-isi SoC na-abịa na isi anọ 75 GHz Cortex-A2.0 na anọ anọ ọzọ 55 GHz Cortex-A1.7. Ọ na-abịa na Mali-G52 2EEMC2 GPU nke na-arụ ọrụ na 820 MHz, ugboro ole zuru ezu Imelite na-agba ọsọ ihe niile egwuregwu dị na ahịa na-enye ezi ahụmahụ nke iji na playback nke multimedia ọdịnaya.
Ntughari Redmi 10X
Ekwentị mkpanaka ahụ ga-abịarute na nhazi nke sitere na ngwakọta nke Redmi Rịba ama 9 yana Pro dị iche iche. A ga-enwe nsụgharị abụọ ya: otu nwere 4G na otu nwere 5G. Nke mbụ ga-adị na nhazi abụọ: 4 GB nke RAM + 128 GB nke ROM na 6 GB nke RAM + 128 GB nke ROM. A ga-enye nke abụọ n'ahịa na ụdị atọ: 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB na 8 GB + 256 GB.
Redmi 10X 4G ga-aga ire ere na agba ọcha, igwe na-acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. mgbe otu 5G ga-eme nke a n'ọchịchịrị na-acha anụnụ anụnụ, odo odo, ọla edo na ọlaọcha. Ekwuru na 4G, na mgbakwunye na ịkwadebe ihe nhazi Helio G70 ahụ ekwuru, ọ ga-enwekwa kamera azụ 48 MP quad, igwefoto selfie nke 13 MP na ikike batrị nke 5.020 mAh, otu nkọwa nke Redmi Rịba ama 9, ma e wezụga maka chipset, nke bụ Helio G85 na nke ikpeazụ. Ikekwe ihe dị iche na 5G ụlọ ọzọ SoC.
Iji nwetakwuo ihe anyị ga-enweta n'etiti etiti a, ị ga-ahụ njirimara na nkọwapụta nkọwa nke Nkọwa 9.
Ekwuputara ụwa niile na njedebe nke Eprel, Redmi Rịba ama 9 bụ ama na-eweta otu n'ime uru kacha mma maka ego niile. Nke a bụ isi ahịa ya mara mma, nke ihuenyo IPS LCD na-akwado nke nwere mgbatị nke 6.53 sentimita ma gosipụta mkpebi 19.5: 9 nke pikselụ 2,340 x 1,080, n'otu oge nke iko Corning Gorilla Glass 5 la na-echekwa. na a kacha ihie nke 450 nits na-ekwu "ugbu a".
MIUI 12 ụbọchị ịhapụ ụwa bụ ọkwa ugbu a
Mgbe anyị gbasaa nkọwa nke ngalaba foto ya, anyị na-ahụ na isi ihe mmetụta 48 MP nke ọ na-etu ọnụ nwere njikọ na 8 MP ultra-wide-angle shooter na mpaghara nlele 118 na anya abụọ MP 2, otu lekwasịrị anya mmetụta (nsogbu) na onye ọzọ maka foto dị nso (nnukwu). 13-megapixel selfie sensor nwere oghere f / 2.3 ma nwee ike ịdekọ vidiyo FullHD na okpokoro 30 kwa nkeji (fps).
Batrị nke ihe karịrị 5,000 mAh ike nke Redmi Note 9 nwere teknụzụ na-ebu ọkụ ngwa ngwa nke 18 W. Ihe na-adọrọ mmasị bụ na ụgwọ ntụgharị nke 9 W site na eriri USB dịkwa n'ụdị C. N'ezie, sistemụ arụmọrụ Android 10 sistemụ etinyela ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, yana ụdị MIUI 11 kachasị ọhụrụ, nke na-echere mmelite MIUI 12, nke a ga-ewepụta echi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi 10X ga-abụ ihe na-atọ ụtọ n'etiti-etiti ruo 8 GB nke Ram na 256 GB nke ROM
Etu esi melite olu nke ekweisi gị na ngwa a akpọ Wavelet